Google Duo ga - eme ka ndị bịaranụ gbasaa ruo mmadụ 32 | Gam akporosis
Google Duo ga-eme ka njedebe nke ndị sonyere ruo mmadụ 32
N'oge na-adịghị anya mbido ọrịa a na-akpali site na coronavirus, ọrụ oku vidiyo ghọrọ otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị eji eme ihe na mpaghara niile, ma na ọkachamara na onwe ya na ezinụlọ, yana Mbugharị bụ ọrụ toro nke kachasị n'echiche a, n'agbanyeghị na ọ bụrụla ọcosta nke nchekwa nke ndị ọrụ ya.
Izu ole gara aga, Google mere ka ndị sonyere na njedebe ruo 12, site na 8 na o nyere na mbido. Agbanyeghị, ọ dị ka njedebe ezughi oke ma onye ọrụ ọchụchọ ahụ ekwupụtala na ọ chọrọ ịkwalite ọrụ ọkpụkpọ vidiyo ya na izu ndị na-abịanụ, ọ ga-alaghachi mee ka ọnụọgụ ndị sonyere na oku vidiyo site na Duo dịkwuo elu.
Ọnụ ọgụgụ ọhụrụ nke ndị sonyere na oku vidiyo ga-abawanye na 32, okpukpu atọ karịa ọnụ ọgụgụ ndị sonyere ugbu a. Mmụba a na ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere ga-ejikọ ya na ohere ịme oku vidiyo site na PC anyị, ụzọ ezi uche dị na nkasi obi nke ọ ga-enye anyị ka anyị na ọtụtụ mmadụ na-emekọ ihe na kọmputa kama iji ekwentị.
Maka ugbu a, arụmọrụ a ga-adị na Google Chrome. Ebidola Google Duo dị ka ọrụ jikọtara na nọmba ekwentị, ihe mgbagwoju anya nke na-ekweghị ka ọ bụrụ ụzọ ọzọ na ndị dị ugbu a mgbe ọ kụrụ ahịa. Kemgbe mmalite nke afọ anyị hụrụ mbido mbụ Google mere jikọta ọrụ a na akaụntụ Google.
Google kwadoro ọrụ a na ndị uwe ojii gam akporoỌrụ a agaghị ewe oge mgbe ị tụlere na site na ọkwa nke mgbatị mmachi site na 8 ruo ndị sonyere 12 ruo mgbe ọ dị, nnukwu ọchụchọ ahụ were naanị otu izu iji mejuputa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Duo ga-eme ka njedebe nke ndị sonyere ruo mmadụ 32
Samsung "edozi" nsogbu ahụhụ na-arụ ọrụ kemgbe 2014
Gụọ Ogologo oge bụ ngwa Google nke na-enyere ụmụaka aka ịmụ ịgụ